अहिले देशैभरी ‘कम्युनिष्ट’ सरकार छ । बाटोघाटो जताकतै छ्याप छ्याप्ती ‘कम्युनिष्ट’ नै ‘कम्युनिष्ट’ भेटिन्छन् । कम्युनिष्टको घोषित दृष्टिकोण वैज्ञानिक समाजवाद हो । वैज्ञानिक समाजवादको दार्शनिक आधार द्वन्दात्मक भौतिकवाद हो ।
तर आफुलाई ‘कम्युनिष्ट’ भन्नेहरुबाट प्रकट विचार र व्यवहारका अभिव्यक्तिहरु हेर्दा तिनमा ‘कम्युनिष्ट’को ‘क’ पनि देखिंदैन । जो आफुलाई यो जमानाको ‘खुँखार कम्युनिष्ट क्रान्तिकारी’ ठान्छन् । तिनमा भौतिकवादी विश्वदृष्टिकोणको अवलम्वन त के त्यसको सामान्य जानकारी पनि रहेको देखिंदैन ।
भौतिकवादले आदर्शवाद¸ अलौकिक शक्तिको अस्तित्व स्वीकार गर्दैन । यो त अरु विचारधाराबाट ‘कम्युनिष्ट चिनिने’ पहिलो बुँदा हो । तर, यता ‘कम्युनिष्ट’ को ढोँगभित्र अध्यात्मवादको चरम पक्षपोषण ! राप्रपाले गाईको ब्यानर टङ्ग्याएर भोट मागी अहिले भिरबाट गाई पल्टाएझैँ !
नाम त ‘कम्युनिष्ट’ राख्नुपर्ने बाध्यता होला । त्यति नराखे त राजनीतिको ‘विजनेश’ चल्न मुश्किल ! ‘सानोतिनो व्यापार’ पनि ठप्प हुने स्थिति । किनकी धर्म, राजा, लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र, पहिचान नामका ‘खुद्रा पसल’ त अरुले नै चलाएर खाइखेलो गरिरहेका छन् ।
अल्पविकसित र गरिबीले आक्रान्त देशमा राम्रै विक्री-खपत हुने बचेखुचेको पसल यत्ति हो ‘कम्युनिष्ट’ को । जसलाई चलाउनै पर्‍यो अलिअलि मिसावट गरेर पनि !
तर जति मिसावट गरेपनि आधारभुत कुरा त मिसावट गर्न नमिल्ने हो किनकी कम्युनिष्ट हुनको लागि न्युनतम आधारभुत प्रस्थानविन्दू त भौतिकवादी दृष्टीकोण नै हो । यहाँ त दूधमा पानी होइन पानीमा दूध मिसाएजस्तो भइरहेको छ । जहाँ दूधको नामोनिसानै बाँकी छैन । पानी नै पानी । दूधको रङ्ग नै बाँकी नरहेपनि कसरी दूध भनी ढाँट्न झुक्याउन सकेको होला ?
माथि केन्द्रमा स्कुल विभागको लफडा । तल कार्यकर्ताहरु आदर्शवाद र भौतिकवाद, भौतिकवाद र अध्यात्मवाद, आस्तिक र नास्तिकको अत्यन्त न्यूनतम कुरा समेत छुट्याउन नसक्ने स्थितिमा !
नेकपाले आफ्नो नाम सच्याउनु पर्‍यो । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमध्ये बीचको ‘क’ अर्थात् कम्युनिष्ट शब्द झिक्नुपर्‍यो । किनकी कम्युनिष्ट दर्शन नेपालमा मात्र प्रचलित दर्शन होइन । यो यहाँ नेपालमा मात्र उत्खनन भएको होइन । यसका विश्वव्यापी मान्यता छन् । यसका विश्वव्यापी रुपमा भाष्यकारहरु छन् । जसले जे अर्थ लाए पनि हुने दर्शन होइन यो । यसका त लिखित र प्रमाणिक दस्तावेज छन् । वस्तु, घटना, पदार्थ, चेतना, राजनीति, अर्थनीति, समाज विकासक्रम, साहित्य, कला, संस्कृति, इतिहास र समाजका हरेक कुरालाई विश्लेषण, व्याख्या गर्ने कम्युनिष्ट दर्शनका अलग दृष्टिकोण छन् । अनि मनलाग्दी तोडमरोड गर्न मिल्छ ?
कम्युनिष्टका अलग पहिचान र मान्यतालाई तोडमरोड गरेर बिटुल्याउने काम नगरौँ ! कम्युनिष्ट विचार र दर्शनलाई सकिन्छ परिष्कृत गरौँ । विकसित गरौँ ! सकिंदैन भने कम्युनिष्ट पार्टीको सदस्य हुनको लागि अनिवार्य रुपमा बुझ्नैपर्ने, ग्रहण गर्नैपर्ने भौतिकवादी विचार र दर्शनलाई गोबरसँग घिउ मिसाएझैँ यसरी आदर्शवादी विचार र आस्तिक दर्शनसँग घुलमिल नगरौँ !
यदि भौतिकवाद र अध्यात्मवादलाई गोलमटोल रुपमा घुलमिल गराउने नै हो भने राजीखुशीका साथ कम्युनिष्ट विचार परित्याग गरौँ । कम्युनिष्टको सट्टा अरु नै नाम राखौँ । आफुलाई कम्युनिष्ट भनेर परिचय दिन छोडौँ । दोधारमा नपरौँ । अलौकिक अज्ञेय भगवान प्रतिको आस्था र अन्य सैद्धान्तिक अवधारणाभन्दा ऐतिहासिक रुपमै भिन्न दर्शन मार्क्सवाद प्रतिको विश्वास संगसंगै एकसाथ किमार्थ मिल्दैन ।